Infinity mutsanga, iyo nyaya yebhuku sezvisati yambotaurwa | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Bvunzo, Vanyori, Nhoroondo yezvinyorwa
Infinity mutsanga rondedzero yakagadzirirwa nemunyori weZaragozan uye philologist Irene Vallejo. Rakadhindwa mu2019, chinyorwa ichi chinorangarira zvakadzama nhoroondo yekusika uye shanduko yebhuku kuburikidza nemazana emakore. Kwapera gore, nekuda kwekubudirira uye kugamuchirwa, basa rakagashira mibairo yakati wandei, pakati payo iri: Spanish National Essay Mubairo uye Critical Ziso reNhoroondo.
Nenyaya iyi, basa remunyori rakatorwa, yakakwanisa kudarika mazana mazana maviri emakopi akatengeswa uye nekukurumidza uve mutengesi anotengesa zvakanyanya. Basa rake rakafarirwa zvikuru paivhu reSpanish, iro rakabvumidza kudyidzana kwaro kwese kwese, zvashandurwa mumitauro inodarika makumi matatu kusvika pari zvino.
1 Infinity mutsanga (2019)
1.1 Nyaya yakazvarirwa pakati pekuomerwa
1.2 Nyaya yakasiyana uye yakakwana
2.1 Professional Zvidzidzo
2.4 Zvinyorwa zvemitambo
Infinity mutsanga (2019)
Iyo nyaya yemapeji anopfuura mazana mana, ayo anorondedzera kugadzirwa kwebhuku, chikamu chekusimudzira kwaro uye zviitiko zvakakosha panguva yaro yenhoroondo. Mune basa iri makore anoda kusvika 3000 ezviitiko anotsanangurwa, pakati pekare nazvino. Mutsara va kubva pakagadzirwa bhuku rekutanga, maraibhurari ekutanga nevaverengi venyika dzekare, kusvika panguva ino.
Nebasa iri munyori akakwanisa kuve mukadzi wechishanu kuhwina Spanish National Essay Prize (2020), pamusoro pekugamuchira zvakanakisa zvirevo. Pakati pekurumbidza, mazwi aMario Vargas Llosa anoshamisa: “Zvakanyorwa zvakanaka, zvine mapeji anoyemurika chaizvo; rudo rwemabhuku nekuverenga ndiwo mamiriro ezvinhu ayo mapeji eiyi nyanzvi inopfuura ".
Nyaya yakazvarirwa pakati pekuomerwa
Munyori aive achipfuura nenguva yakaoma yemhuri Paakatanga kunyora bhuku iri, mwanakomana wake airwara zvakanyanya. Kwemwedzi yakawanda aigara muchipatara nemwana wake, pakati pemakumi mazhinji ekurapwa, chemotherapies, tsono uye nguo dzebhuruu.
Asi Irene zvakare akapotera mumabhuku, panguva ino achinyora rondedzero yake. Ndichiri kurerukirwa nemurume wake, aizoenda kumba, otora kabhuku kake, otanga kunyora. Nenzira iyi, litterat yaive nenguva yekudzikama nerunyararo, kure nekufunganya kwekanguva. Pasina kana kufungira kuti angave achinyora kubudirira kwaizochinja hupenyu hwavo.
Nyaya yakasiyana uye yakakwana
Mazhinji katarogu Infinity mutsanga senhaurwa inoshamisa uye inoshamisa, sezvo zvirimo zvakakwana uye zvakasiyana. Mariri, zvinokwanisika kuwana zvakajairika uye zvechivanhu ruzivo senge kuseka, nhetembo, rondedzero, nyaya dzekumaruwa, nhoroondo, nhoroondo dzezvinyorwa uye etymologies. Kuwedzera kune makuru enhoroondo zviitiko zviripo panguva iyoyo yakakura nzira yeanopfuura mazana emakore makumi matatu.
Iro zita iro munyori pakutanga aida kupa rondedzero raive: Kuvimbika kusinganzwisisike, kubhadhara mutero kuBorges. Asi yakagadziridzwa pane zvakataurwa neiyo imba yekutsikisa, panguva ino achireva Pascal, uyo akataura kuti vanhu "vafunga tsanga".
Basa racho rine zvikamu zviviri; yekutanga: Greece inofungidzira ramangwana, iine zvikamu gumi neshanu zvakazara mukati. Ikoko, nyaya inomhanya nenzira dzakasiyana siyana: hupenyu nebasa raHomer, nhandare dzehondo dzaAlexander Mukuru, Raibhurari hombe yeAlexandria - kubwinya nekuparadzwa kwayo - Cleopatra. Zvakare, nguva dzakaoma dzenguva uye kubudirira: kutanga kwearufabheti, bhuku rekutanga uye zvitoro zvemabhuku zvinofamba.
Ipapo une chikamu chechipiri: Migwagwa yeRoma. Ichi chikamu chine zvitsauko 19, pakati pazvo pane: "Varombo Varombo, Vaverengi Vapfumi"; "Librero: kutengeserana nenjodzi"; "Ovid anodhumhana nekudzivirira"; uye "Canon: nhoroondo yetsanga". Munyori anoreurura kuti kwaive nechetatu bato rakaenda kusvika pakugadzirwa kwemuchina wekudhinda, asi ndakafunga kuchengeta zvirimo, sezvo zvaizoita kuti rondedzero yacho ive refu kwazvo.
Icho chinyorwa icho inofamba kuburikidza nekugadzirwa kwebhuku kuburikidza nezvinhu zvakasiyana, senge: utsi, dombo, ivhu, tsanga, zviumbwa, nhokwe, matehwe, uye mwenje. Chii chimwe, inorondedzerawo zviitiko zvakaitika umo mavanotsanangurwa: nhandare dzehondo, kuputika kwegomo, dzimba dzechiGiriki, kutanga kwemaraibhurari nenzvimbo dzekugadzira makopi akanyorwa nemaoko.
Panguva yenyaya mavara akasiyana anobuda uye anopindirana, uyo unofanira kukunda nhamba yakati wandei ye nhamo dzekuchengetedza mabhuku. Haisi yezve magamba, asi nezve vanhuwo zvavo: vadzidzisi, vatengesi, vanyori, vanyori venhau, vapanduki, vashanduri, varanda, pakati pevamwe.
Saizvozvowo, inotaura nezvenhoroondo yezvino; Chikamu chakakosha chemakakatanwa ane chekuita nenyaya yekunyora inoburitswa. Rondedzero izere yematanho akasiyanasiyana ayo mabhuku akapfuura nawo mukufamba kwavo seimwe yenzira dzakakosha kwazvo dzekuparadzira ruzivo.
Muna 1979, guta reZaragoza rakaona kuzvarwa kwaIrene Somoza. Kubva achiri mudiki kwazvo, akatanga chisungo nemabhuku, semhedzisiro yevabereki vake vachimuverengera nekutaura nyaya vasati varara. Na6 akasangana Odyssey, baba vake vakamuudza iye husiku husiku senge nyaya, uye kubva ipapo iye anofarira nyaya nezve ngano.
Mumakore ake ekuchikoro akabatwa kudheerera nevamwe vaaidzidza navo, avo vakatomukonzera kumurova. Mhuri yake yaive yakakosha kutsigira panguva ino, kunyange hazvo nzvimbo yake huru yekutizira yaive mabhuku. Kuna Irene, kuuya kumba uye kuverenga kwaionekwa senge rudzi rwekuponeswa.
Munyori akaita zvidzidzo zvake mukuru en mayunivhesiti eZaragoza neFlorence, kwaakapedza kudzidza uye akazowana doctorate mu Classical philology. Mushure mekupedza basa rake, akazvipira mukudzamisa nekuparadzira zvese zvine chekuita neyekare zvinyorwa.
Iyo litterat iri akaroora mugadziri wefirimu Enrique Mora, naani ane mwanakomana anonzi Pedro.
Pamusoro pebasa rake semunyori uye philologist, aishanda semudzidzisi kumayunivhesiti akasiyana siyana munyika. Pari zvino, anonyora zvinyorwa zvemapepanhau eSpain Nyika y Herald weAragon, umo huchenjeri hwekare hunopindirana nemitambo yazvino. Dzakati wandei dzewongororo idzi dzakanyorwa mune maviri emabasa ake: Izvo zvakapfuura zvakakumirira (2008) uye Mumwe munhu akataura nezvedu (2010).
Iye munyori ane kwaari chikwereti mabhuku masere, yake yekutanga posvo yaive: Chiedza chakavigwa, inonakidza yakaburitswa muna 2011. Gare gare, akabata mumabhuku evana nevechidiki, aine Muvambi wekufamba (2014) uye Nhoroondo yemanyoro nyoro (2015). Akaenderera achiti: Muridzo wemupfuri, nyaya yerudo uye yekushambadzira yakaburitswa muna 2015.
Bhuku rake razvino rakasvika mu2019: Infinity mutsanga, y munguva pfupi yakava bestseller. Iyi rondedzero yakapihwa kakawanda kubva payakaburitswa. Pamusoro peiyo Inokosha Ziso reNhoroondo (2019) uye National Essay (2020), akawanawo misiyano: Los Libreros Inokurudzira (2020), José Antonio Labordeta Mubairo weLitau (2020) uye Aragón Prize 2021.
Raibhurari uye inotsoropodza-zvinyorwa zvinyorwa muMarcial (2008)
Izvo zvakapfuura zvakakumirira (2010)
Chiedza chakavigwa (2011)
Muvambi wekufamba (2014)
Nhoroondo yemanyoro nyoro (2015)
Muridzo wemupfuri (2015)
Mumwe munhu akataura nezvedu (2017)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Bvunzo » Infinity mutsanga